बिचार/ब्लग – SawalNepal
विष्णुप्रसाद पोखरेल दमक/दमक ९ स्थित महालक्ष्मि बिद्यालयभित्र प्रवेस गर्न साथ मेरो आँखा पुग्यो त्यहाँ गेट छेउमा नै रहेको पानी तान्ने ट्युवेलमा । जहाँ सायद महिनौ देखि पानी नआएको हुनुपर्छ र चलेको छैन । बालमैत्री जस्तै देखिने होचो ट्युवेलको त्यो अवस्थाले नै मलाइ लाग्यो यहाँको अवस्था कस्तो होला ? मैले अर्को ट्युवेल खोजे
लालबहादुर खत्री करिब ९७ लाखवर्ग कि.मी क्षेक्रफलको विशाल भूगोलमा फैलिएको चीन र यसको बिशालताका अनेक रंग, तरेली र बान्कीहरु छन् । संसारको सबैभन्दा प्राचीन मानव सभ्यताको इतिहास बोकेको चीनले आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिगत महानताका सबै आयामहरुलाई आजपर्यन्त संरक्षित र संबर्धित राखेको छ, घट्न खिईन दिएको छैन बरु त्यसमा चमत्कारिक बढोत्तरी गरेको छ । चीनले हालसम्म
पदमसिंह कार्की पच्चीस वर्षमा त्रिशूली नदीको पानी अबिरल बगे पनि दासढुंगाको दाग अझै पखाली सकेको छैन। २०५० जेठ ३ गते साँझ पोखराबाट चितवन जाने क्रममा जीप दुर्घटनामा तत्कालिन एमालेका महामन्त्री मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आ िश्रतले सहादत प्राप्त गरे। अहिलेसम्म दशीप्रमाणसहित हत्याराको टुंगो लागि नसकेको यो दुर्घटना रहस्यमै रहन वाध्य छ। यो
इटहरी । महिला अधिकारका क्षेत्रमा आवाज उठाइरहेकी पछिल्लो समय यौन व्यवसायलाई वैधानिक बनाउनुपर्ने माग राखिरहेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अन्तर्वार्तामार्फत् यौन व्यवशायलाई वैधानिक बनाउन माग गरेकी हुन् । उनका पछिल्ला केही स्टाटसहरुमार्फत् यौन व्यवशायलाई वैधानिक बनाएमा बलात्कार घट्ने र देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने विचार राखेकी छिन् । उनले बुधबार बिहान
दमक र आसपासमा टिपर राज्य ! जति भनेपनि सुनुवाइ गर्दै प्रशासन
विष्णुप्रसाद पोखरेल दमक र आसपासको क्षेत्रमा टिपरले क्षमता अर्थात डालीभन्दा माथि निर्माण सामाग्रि बोकेर सडकमा हिड्ने अन्य सवारी साधन तथा यात्रु जोखिममा परेकाछन् । त्रिपालले छोपेजस्तो गर्ने तर गिटी तथा बालुवा र पानी सडकमा खसाल्दै हिड्ने गरेपनि सडकमा रहने न ट्राफिक प्रहरीले यसमा ध्यान दिएको पाइन्छ न जनपथ प्रहरीले नै । दमकको मुख्य बजार
रसमिला थपलिया / अति काम, न्यून तलब। धेरै गाली, थोरै जस। बेटुंगो ड्युटी, कामको जोखिम। नर्सिङ पेसा बाहिरबाट हेर्दा जति सजिलो र आकर्षक देखिन्छ, त्यति सजिलो पक्कै पनि छैन। ज्यानलाई धरापमा राखेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर पनि बिरामी, बिरामीका आफन्त, डाक्टर, अस्पताल प्रशासन सबैको आँखाको तारो बनिरहेका छन्, नर्सहरु। एक जना नर्सले
शनिबारको खाली समयमा डेटिङ जाँदा के गर्ने, के नगर्ने ? पहिलो डेटिङ स्मरणीय बनाउने टिप्स
हप्ताको ६ दिनसम्म काममा व्यस्त हुने कर्मचारी, व्यवसायी, विद्यार्थीका लागि शनिबार विशेष दिन । सरकारी कार्यालय तथा अधिकांश निजी क्षेत्रमा पनि शनिबार बिदा दिइने भएकाले यो दिन पारिवारिक जमघटको दिनका रुपमा लिइन्छ । शहरको व्यस्ततामा दैनिकी गुजार्नेहरुले शनिबारलाई घुमघामको दिनका रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि युवा पुस्ताका लागि बिदाको दिन अझै विशेष
एक दुई दिन देखि दुनियाँकै रुवाउने हृदय विदारक तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
काठमाडौँ । आमा आफैमा महान शब्द हो । आमाको माया कति अपार हुन्छ भन्ने कुरा हरेक सन्तानले आभाष गरिरहेका हुन्छन् । संसारको सबैभन्दा ठूलो भनेको नै आमा हुन् । संसारकी सृष्टि आमा नै पहिलो भगवान हुन् । जति अरु शब्दको बयान गरिन्छ आमाको बयान कुनै शब्दले गर्न सकिदैन् । ￼जसले सुन्दर संसार देख्न पाएनन्
पुरुषको आवश्यकतासँग जोडिएको कण्डम फ्री हुने तर महिलाको प्याड किन फ्री नहुने ?
घोराही | पुरुषको आवश्यकतासँग जोडिएको कण्डम निःशुल्क हुने तर, महिलाका लागि नभै नहुने स्यानिटरी प्याड किन निःशुल्क नहुने ? अहिले यो विषयले चर्चा पाएको छ । धेरैजसो अधिकारकर्मी तथा नारी समानताका लागि काम गर्दैआएका सङ्घसंस्थाले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाइरहेका छन् । एक महिलाले किशोरी अवस्थामा प्रवेश (११ देखि १५ वर्ष) गरेदेखि करीब ५०÷५२ वर्षको
ब्रेकअपपछि एक्स पार्टनरलाई सामाजिक सञ्जालबाट ब्लक गर्ने की न गर्ने ? जान्नुहोस् …
काठमाडौँ । प्रेम सम्बन्ध टुटेपछि सजिलै बिर्सन कहाँ सकिन्छ र ? सम्बन्ध टुटेर भौतिक शरिर टाढा भएपनि भावनात्मक पिडाले पिरोलिरहेको हुन्छ । अझ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका ती अतितहरुले त पिडालाई बारम्बार बल्झाइदिन्छ । यद्यपी जो बिगतलाई सम्झेर झस्किरहेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले वर्तमान बिगार्ने ? के आफ्नो गर्लफ्रेण्ड वा ब्वाई फ्रेण्डलाई फेसबुक लिस्टबाट हाउने गर्दा